Golaha Shacabka oo loo qeybiyay qoraal ku saabsan muddo kordhin - Awdinle Online
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa waxaa uu kulan uga socdaa Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho, waxaana kulankooda horyaal mooshin la xiriira arrimaha doorashooyinka oo uu weli muran ka taagan yahay.
Kulanka waxaa shir guddoominaya Guddoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo kuxigeenadiisa Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey & Mahad Cabdalle Cawad.
Xildhibaannada ayaa waxa loo qeybiyay qoraal ka kooban 7 qodob oo mid kamid ah qodobada uu kujiro qoraal cadeeynaya in Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka la siiyo muddo laba sano ah oo ka dhigay mudo kordhin.
Xildhibaannada ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay Qodobada loo qeybiyay, waxaana qaarkood ay ayiden in laga dodo mooshinka la xiriira doorashooyinka halka qaarkood ay kasoo horjeesteen.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa sheegay in Xarunta Golaha Shacabka la keenay Ciidamo isugu jira Boolis iyo dharcad , kuwaas oo al doonay in lagu cabsi geliyo Xildhibaannada.
Dooda ku saabsan in la guda galo ajandaha Kulanka Golaha shacabka ee la xiriira mooshinka doorashada ayaa weli socota, iyada oo Xildhibaannada ku kala aragti duwan yihiin.
Previous articleMadaxda dowladda, waxay dalka ku riixayaan kala-tag iyo fowdo” Cumar C/Rashiid”
Next articleMidowga Musharixiinta oo sheegay in Farmaajo dalka ku wado God Madoow